Kooxda Atletico Madrid doonaysa in saxiixa De Maria ay kula dagaalamaan Inter Milan – Gool FM
Kooxda Atletico Madrid doonaysa in saxiixa De Maria ay kula dagaalamaan Inter Milan
Dajiye July 14, 2018
(Atletico) 14 Luulyo 2018. Wargeyska Isbaanishka ah ee “Marca” ayaa shaaca ka qaaday in mustaqbalka Angel de Maria ee kooxda Paris St Germain uu ku jiro shaki xoogan,
Saxiixiisa xidiga reer Argantina ee Angel de Maria ayaa si aad ah u wada xiiseenaya kooxo fara badan ee qaarada Yurub.
Angel de Maria ayaa kusoo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan kooxda PSG, wuxuu kasoo muuqday 30 kulan, isagoo sidoo kale dhaliyay 11 gool, wuxuuna caawiyay 6 gool kale ee ah horyaalka dalka Faransiiska.
Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in kooxda reer Spain ee Atletico Madrid ay diyaar u tahay in dhigeeda Inter Milan ay kula dagaalanto saxiixa Angel de Maria si uu ugu xoojisto safkiisa xili ciyaareedka cusub.
Macalinka Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa u arka xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee de Maria uu wax weyn kusoo kordhin karo kooxdiisa xili ciyaareedka soo aadan, hadii ay ku guuleystaan saxiixiisa.
Halyayga reer Croatia Davor Suker oo ku taageeray Modric loolanka loogu jiro ku guuleysiga abaal marinta Ballon d'Or